Ireo rohy anatiny dia tsara ho an'ny zavatra sasantsasany, fa tsy hanatsara kokoa ny toerana misy anao! -SEO avy amin'ny Expert From Semalt, Natalia Khachaturyan
Tena ilaina ny rohy anaty ao amin'ny fanampiana ireo mpampiasa hivezivezy amin'ny pejy iray amin'ny tranokala iray hafa. Mitana anjara toerana manan-danja izy ireo amin'ny fanatrehana ny traikefan'ny mpampiasa. Ireo rohy ireo dia manolotra tanjona roa voalohany amin'ny fikarohana fikarohana (SEO). Voalohany, ny rohy anatiny dia tompon'andraikitra amin'ny fanamorana ny dingan'ny fitaovam-pikarohana hitady pejy ao amin'ny tranonkalanao - data bilisim internet hizmetleri. Ny kalitaon'ny rohy ao amin'ny pejinao dia manampy amin'ny fametrahana ny pejinao. Ny isan'ireo rindran-tserasera anatiny mifandraika amin'ny pejy dia manome famantarana momba ny maha-zava-dehibe ny pejy.
Ny tetikady manokan'ny aterineto avy amin'ny Semalt , Natalia Khachaturyan, dia manazava fa ny rohy anatiny dia mandeha amin'ny pejy iray mankany amin'ny faritra hafa manampy anao hivezivezy amin'ny tranokala. Izy ireo ihany koa dia tompon'andraikitra amin'ny fametrahana ambaratongam-pihariana miankina amin'ny maha-zava-dehibe ny fampahalalana izay natao ao amin'ny tranonkala iray. Manampy amin'ny fanaparitahana ny fahefana mifehy manerana ny tranokala izany.
Ho an'ny laharana ambony SEO, ny milina fikarohana dia mila mahita ny votoatiny sy ny kalitaon'ny teny fanalahidy sy ny fomba nampiasana azy ireo. Mba hanaovana zavatra mora, ny milina fikarohana dia mila rafitra rohy mikorontana izay manampy azy handefa ny làlan'ny tranonkala hahitana ny pejy rehetra amin'ny tranonkala. Ny fahadisoana ratsy indrindra nataon'ny ankamaroan'ny tranonkala dia manafina ny rohy voalohany na ny fandevenana azy amin'ny fomba izay tsy ahafahan'ny lozisan'ny fikarohana. Izany dia misakana ireo pejy tsy hivoaka amin'ny endriky ny motera. Ireo pejy dia mety misy lahatsoratra sy teny maoderina tena tsara, saingy tsy hahafantatra azy ireo i Google, noho izany dia tsy handray anjara amin'ny fizotry ny tranokalanao izy ireo.
Ny tranonkala tsara indrindra dia ny iray miaraka amin'ny rohy faran'izay kely indrindra ao amin'ny pejy fandraisana sy ny pejy hafa. Izany dia mamela ny laharan-tariby ahafahana mivezivezy manerana ny tranonkala izay manome vahana ny isa Raha te hanatanteraka izany ianao, dia mila mampiasa rafitra sy rohy hafa ankoatra ny ADN. Ity format ity dia takatra amin'ny motera fikarohana raha mora atao ny manara-maso. Ny antony mahatonga ny pejy sasany tsy azo ovaina dia tsy voasokajy hoe:
Ny fepetra takiana
Mety misy singa fototra toy ny fanongan-tsofina na fanadihadiana iray manontolo. Ireo endrika ireo dia mety hisakana ny fikarohana tsy hiditra amin'ny rohy na ny votoatiny izay tsy hitan'ny mason'ny fikarohana.
Ireo rohy izay tsy azo henoina afa-tsy amin'ny boaty fikarohana anatiny
Tsy afaka mahita ny votoaty miafina ao ambadiky ny rindrin'ny fikarohana ao amin'ny tranonkala ny spider, ka noho izany dia tsy hovana ny pejy toy izao.
rohy amin'ny plug-ins
Ireo rohy ireo dia tsy azon'ny mpikaroka mitady azy.
Raha voasakana ny robot.txt na ny meta robots tag
Ireo metatra robot.txt sy ireo robot.txt dia mametra ny zana-tsipika amin'ny fidirana pejy manokana
Ireo rohy izay eo amin'ny pejy misy rohy maro
Izany dia hampihena ny fetran-tsasatry ny fikarohana. Ny hany azo antoka dia ny mba hahazoana antoka fa ny pejy tsirairay dia manana pejy 150 fara-fahakeliny raha tsy izany dia hisakana ny pejy sasany tsy hokoronina.
Ny fialana amin'ireo voina voalaza ireo dia mampitombo ny fahaiza-manaon'ny fikarohana fikarohana mba hikirakirana amin'ny pejy rehetra mamela azy ireo ho voasokajy ho an'ny SEO. Ataovy antoka fa mametraka ireto fijery ireto ianao rehefa mamorona rohy anatiny.